Iko Brenton Harrison Tarrant inorwisa kutanga kwebato rakanaka rekurwisana neTurkey here? : Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 17 March 2019	• 10 Comments
Kana tichifanira kutenda zvitsva zveBrenton Harrison Tarrant iye aizoda marwendo anodiwa avo vanoita sevari kunyanya zvekare mumamiriro ezvinhu. Mari yekufambisa kwemafambiro ake aizouya kubva kuBitconnect (crypto currency) inowedzera mari. Izvozvo zvinonzwika sechinhu chakakosha chabi. Chinonyanya kukosha ndiwo mitsara inoti Tarrant inoratidzika inoda kurwisana nekumuka kweUtoman Empire. Tarrant inonzi inoshanyira Uturuki nePakistan; nyika mbiri dzakanyatsobatanidzwa mune zvechitendero-zvenhoroondo. Kubatana naAnders Breivik kunoitwawo. Zvinyorwa zveBulgaria zvakatsanangurira New Zealand Messenger kuti zvinyorwa zvezvombo zvakawanikwa zvakanyorwa muCyrillic. Zvinyorwa zvingaratidza mazita ehondo dzakakurumbira uye nhoroondo dzezvakaitika kubva kuBalkans. Hondo idzi dzakarwa neHurumende yeOttoman. Hondo dzinopesana neOttoman Turks zvakare yaiva chinyorwa chemugandanga weNorway Anders Breivik.
Zvinoratidzika kuti kukakavadzana pakati pe "vaKristu" nevaMuslim kunenge kuwedzera kukura kusvika kune zvikomo zvakakwirira. Saka handingashamisi kana tikaona kuwedzera nokukurumidza kwehugandanga hwemapapiro eEurope uye neU.S. Ramba uchiyeuka kuti izvi zvichida kushanda kwepachivande umo mabasa echivande akave akasikazve boka ravo rinotyisa. Ndinofungidzira kuti kuchava nekubatana naTuthullah Gülen (akasarudzwa neTurkey seboka reFETO rinotyisa). Iniwo ndinofungidzira kuti tichaona mishumo yenguva pfupi kuti Tarrant akaronga misangano yekuisa nheyo dzemasero aya anotyisa. Zvichida kushamwaridzana kweBalkan kuchaitwa kumakore - Yugoslavia war related - Serbian fighters (muvengi wekare weOttoman). Izvi zvinogona kureva kuti tichaonawo zvimwe zvakadai (mumaonero angu PsyOp) kurwiswa pamusoro pezvinangwa zveIslami (uye zvino kunyanya Turkish).
Lees kungodzoka pano nei maziso angu tiri kutarisa zvakare ne PsyOp (kushanda kwepfungwa).
Zvose izvi zvinotangira nheyo yeTurkey inotarisirwa kwenguva refu yekuEurope kudya kweEurope. Kana tichizoona kupikisa kwemahedheni echiKristu-fundamentalist anotyisa uye hukama hunoitwawo neSerbia neFETO, iyo ndiyo ndiyo yakakwana yeAridogan kuuya kuEurope. Ini ndakafanotaura izvi nokuti iri chikamu cheScript umo ndakataura kuti umambo hweOttoman huchadzoka ku2023. Iyi script inosangana neuporofita hwekunamata uye inosangana netsamba inobva ku1871, kubva paC33e degree Scottish Ride Freemason Albert Pike kune shamwari yake Giuseppe Mazzini, umo akafanotaura hondo nhatu dzenyika. Iviri yekutanga yeiyi yakanyorwa uye yakashandiswa kusimbisa nyika yeIsrael. Hondo yechitatu yenyika ichava pamusoro peJerusarema uye ichaitika pakati penyika yeIslam nemasara enyika yeZionist. Iwe unofanirwa kufunga munyaya iyi yekurwa pakati peUtamende hwakadzorerwa neIsraeri pamwe neAmerica. Iwe uchawana nheyo yakakura yekufanotaura kwangu kwekumuka kweUtoman Empire mu ichi chinyorwa. Muchirevo chekunzwisisa zviri nani zviitiko zvezvino, zvinobatsira kutora izvi. Saka verenga nenyaya yacho zvakanyatsonaka.
Ngatitarisei mharidzo munguva yemberi iri pedo, asi kana tichizoona kuitika kwekurwisana uye kurwisana kwekurudyi kunoratidzika kunge kwakarongeka zvakanaka kuti iite sedhiyabhorosi kunze kwebhokisi, zvino yeuka uku kutaurira zvakare.
Verenga mukati ichi chinyorwa kuti iwe unogona sei kuverenga kuverenga kuburikidza neshoko.
Source chinyorwa listings: rt.com
New Zealand attack: tsanangudzo yekugadzirisa nyika yose, kusagadzikana kwevanhu uye kuparadzanisa
NATO: mharidzo dzinyararire pamusoro pekukakavadzana kunopoteredza Turkey kuendeswa kune EU
Kubvira ikozvino kuTurkey nhoroondo Atatürk zvikoro zveDutch: nokuti EU ichakurumidza kuiswa neOttomans
Tichazotanga! A 2019 anofara uye ane hutano kune verenga vose!
Tags: Anti, Bitconnect, Brenton, zvakanyanya, Featured, FETO, Harrison, Ottoman, zvakarurama, mupfumi, Tarrant, ugandanga, turkey
17 March 2019 pa 00: 57
"Isuwo tinoziva kuti mauya kune zvakawanda zvekare zvechiKristu uye nzvimbo muTurkey," akadaro Erim, achiwedzera kuti mune manifesto iye anofungidzirwa kuti akatumira paIndaneti anotaura Hagia Sophia.
I Hagia Sophia iye zvino inzvimbo yakakwirira yemasikiti-yakashandurwa museumamu muIstanbul, yakanga isati yava kereke yeGreek Orthodox Christian patriarchal kusvikira 1453 apo Umambo hweOttoman hwakakunda Istanbul.
17 March 2019 pa 00: 59
IvaSerbia ndeyomuGreek Orthodox uye tinogona (zvichida) tarisira kuti kubatana kuchaitwa neSerbia.
Chengeta musi we29 muna May - zuva rekuwa kweConstantinople mu1453; kubatwa kwaConstantinople nevaOttomans. Kuguma kweByzantine Empire
Tinogona kutarisira kurwisa kwakarurama kwemagandanga muIstanbul (yaimbova Constantinople) here?
17 March 2019 pa 01: 04
Ugandanga hwakarurama huchave huchibatanidzwa neTurkey kuna Donald Trump, nokuti anoramba kutora Fethullah Gülen.
Nenzira iyi kubatana pakati peTrump, yakanyanyisa kururamisa uye (yakarongedzwa) mamwe majeredzi (akadai neAppowars, Alex Jones, nezvimwewo) anogonawo kuitwa uye mombe inogona kutungamirirwa zvakananga kumashure endaneti nhepfenyuro yekare yezvematongerwo enyika. Kurwisana nekudyidzana kwenyika nekutsoropodza kwemasvikiro uye "kusvibiswa" nhoroondo dzezvezvekugadzirisa zvekare zvinoshandiswa.
Icho ndicho kutanga kwemaketani.
18 March 2019 pa 23: 49
Paiva nemavhidhiyo paIndaneti yakave yakasvibiswa kubva mumotokari yeaipomerwa. Rwiyo rwakaipisisa rweSerbia rwuri kutamba seri redhiyo.
18 March 2019 pa 23: 53
Iwe unayowo unobatana nevhidhiyo iyoyo here?
19 March 2019 pa 17: 29
Yaiva mararamiro, asi Youtube inoita sokuti yakabvisa vhidhiyo (chikamu chekutsoropodza ...?)
17 March 2019 pa 02: 44
17 March 2019 pa 14: 54
Nzira kuburikidza nekunzwisisa kuti Tarrant yakadzidziswa zvechiuto mu 2017 uye 2018. Kufungidzira katatu mune nyika ipi?
17 March 2019 pa 18: 46
@ Sunshine. Chokwadi nezvinobva fadza. Zvinokurudzira kusanganisira zvisina kupindurwa zvinonzi mibvunzo yehupenzi hazvina kukosha.
30 March 2019 pa 15: 33
New Zealand attack: tsanangudzo yekugadzirisa nyika yose, kusagadzikana kwevanhu uye kuparadzanisa »
Total Visits: 11.678.972
MaAmazon ari kutsva, mapapu epanyika ari pamoto!
Kuchave nemisoro ichizungunuka mune yeJeffrey Epstein kesi?
Mutungamiri Osama op MaAmazon ari kutsva, mapapu epanyika ari pamoto!
Camera 2 op MaAmazon ari kutsva, mapapu epanyika ari pamoto!
Hare op Nei iyo transgender inova tsika itsva yeiyo 21 yezana uye iye murume nomurume vanonyangarika
Martin Vrijland op MaAmazon ari kutsva, mapapu epanyika ari pamoto!
Itai 1.615 vamwe vanyori